Mifarana ny krizin-dranomasina UK-Iran, navotsotr’i Iran ihany ireo tantsambo Britanika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 22:26 GMT
Nandidy ny famotsorana ireo tantsambo Britanika 15 notànana an-tranomaizina ny filoha Mahmoud Ahmadinejad tamin'ny Alarobia, fihetsika natao “hampisehoana ny fitiavana Silamo eo amin'ny vahoaka Iraniana.” Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nanambara izy fa na dia nanan-jo hitory ny Britanika amin'ny fiampangana fitsofohana an-keriny ao amin'ny ranomasimbe Iraniana aza i Iran, dia hamela heloka sy hamotsotra azy ireo izy.
Nandritra izany fotoana izany, tonga tao an-tanidrazana ireo miaramila Britanika tamin'ny Alakamisy ary nilaza fa nampijaliana izy ireo tany Iran , nampiseho ny kapiteny nitarika ireo tantsambo 15 nogadraina tao Iran ny SkyNews, niaiky ity kapiteny ity fa nanangom-baovao (fitsikilovana) momba an'i Iran izy ireo.
Akbar Montakhabi manontany izay azon'i Iran tamin'ny faran'ny tantara? Nilaza izy fa nangataka tamin'ny governemanta UK i Iran mba hanao fialantsiny amin'i Iran alohan'ny hamotsorana ireo tantsambo saingy nandà ny governemanta Britanika.
Marayma Shabani nilaza hoe, “Very ianao Atoa Filoha. Navotsotrao izy ireo taorian'ny nanomezan'ny praiministra Tony Blair anao 48 ora. Inona no azontsika? Nanafaka ireo tantsambo 15 ianao ary diplaomaty Iraniana iray no tafaverina. Eo am-pelatanan'ireo mpanao politika Britanika ny fandraisana an-tanana ara-politika fa tsy eo am-pelatanantsika. “
Pasokhgoo manoratra fa, araka ny Lalàm-panorenana Iraniana, ny mpitarika ny Repoblika Isamika Ayatholah Khamenei no afaka mamela heloka an'ireo mpanao heloka bevava, saingy tsy nanonona ny anarany ny filoha Ahmadinejad.
Nilaza i Hoder fa misy lesona maromaro azo tsoahina amin'ity tranga vao haingana ity. Iran, hoy izy, no mpandresy tamin'ny fiatoana vao haingana, raha nanala ny fandrahonany ny fitondrana mpifanolo-bodirindrina akaiky indrindra Iraka sy Afghanistan i Etazonia. Nilaza koa ity bilaogera ity fa miray saina kokoa noho izay eritreretin'ny rehetra ny firafitr'i Iran. Fahadisoana lehibe ara-tetikady ny fiantsoana ny Mpiambina ny Revolisiona ho Mafia na governemanta ao anaty governemanta.
Rebel Radio, etsy ankilany, nilaza hoe:
Shirzad milaza fa ny olana momba ireo tantsambo any UK sy ny fifampiraharahana nanaraka izany dia mety ho tari-dalana ho amin'ny fifanarahana nokleary. Nilaza ilay bilaogera fa haingana ny fifampiraharahana ary mivaingana ny vokany. Nampiany koa fa, angamba, maro ireo mpanara-maso tsy mahatakatra fa ny manampahefana ao Iran dia mijery vokatra amin'ny fotoana tena fohy toy ny fomba fitantanan'izy ireo ny toekarena Iraniana.